VPA ရလဒ်များ | FLEGT
ယနေ့အထိ အတွေ့အကြုံများက ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPAs) ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သည့် အကျိုးရလဒ် များရရှိသည်ကို ဖော်ပြနေသည်။ VPA ၏ စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများသည် အဖွဲ့ဝင်တို့က ဖြစ်ပေါ် လာအောင်လုပ်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည့် ရလဒ်များကို ဖော်ပြထားသည်။ အခြားအကျိုးရလဒ်များကို ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှပင်ရရှိသည်။ VPA ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ များက VPA တစ်ခုစီသည် ယခုကဲ့သို့ အောင်မြင်မှုများရရှိရန် မည်ကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းပေးသည်ကို ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
EU သည် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်းဖြင့် သဘောတူညီချက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး နိုင်ငံပိုင် ဖြစ်ခြင်းကို သေချာစေရန် အကြံပြုထောက်ခံသည်။ နောက်ဆုံးတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရများကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ မည်သို့ပါဝင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး အများဆန္ဒရယူခြင်းကို အလေးထားရမည် ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ကVPA လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အလွှာစုံမှအကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ များပါဝင်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် နေရာလွတ်များ ဖန်တီးရာတွင် ကြီးမားသောခြေလှမ်း များပြုလုပ်နေကြသည် ဟုဆိုလိုသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များ အခြေအနေ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပါဝင်ခြင်းသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေနိုင်ပါသည်။
ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်။ ယနေ့အထိ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အစိုးရများသည် EU နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းစတင်ရန် မဆုံးဖြတ်မီ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် တိုင်ပင်ခဲ့ပါ သည်။ အကယ်၍ ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လုပ်ခဲ့လျှင်VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်များ တွင်လည်း ဆွေးနွေညှိနှိုင်းခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါသည်။
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ၊ အလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သော ဦးဆောင်ကော် မတီများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့များစသည့် တရားဝင် သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ တွင်ပါဝင်ကြသည်။ ယနေ့အထိလက်မှတ်ထိုးပြီးသမျှ VPAs အားလုံးတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် ဆွေးနွေးပွဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဆင့်။ ယနေ့အထိ VPAs အားလုံးတွင် သဘောတူညီချက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်လာစေရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည့် ပင်မစာသားရှိ အပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ပါဝင်ပါသည်။ ပါဝင်ခြင်းသည် ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုယ်စားပြုခြင်း ပုံစံနှင့် VPA အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့်၊ သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ဖွဲ့စည်းသည့် အမျိုးသားအဆင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံများဖြင့် ပါဝင်နိုင်သည်။
VPA များသည် အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ဖြစ်ပေါ် ရမည့် ပထမဦးဆုံးသော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ VPA ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ကြသည့် သစ်တင်ပို့ သည့်နိုင်ငံအများစုသည် ထိုကဲ့သို့ အားလုံးပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်မျိုး ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးပါ။
VPA မှ ပါဝင်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်နိုင်သနည်းVPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ နှင့်ပတ်သက်သည့် ကဏ္ဍ တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်သည် VPA ၏ ပင်မကျောရိုးဖြစ်ပြီး မိတ်ဖက်နိုင်ငံအား။ ။
သစ်တောမှ ဆိပ်ကမ်းအထိ သစ်နှင့် သစ်ထွက်ကုန်များ၏ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက် ထိန်းချုပ်ခြင်း
တရား၀င်ထုတ်ကုန်များအတွက် FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်တစ်ခုလုံးအား ကြားအဖွဲ့(သို့)သီးခြားလွပ်လပ်သည့်အဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးစေခြင်း
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကဏ္ဍ တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
FLEGT လိုင်စင်ရ ထုတ်ကုန်များအား ကုန်သွယ်ခြင်း
VPAs များသည် EU ဈေးကွက်သို့ FLEGT လိုင်စင်ရထုတ်ကုန်များတင်သွင်းခြင်းဖြင့် သစ်နှင့်သစ်ထွက် ပစ္စည်းများတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးကိုမြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ VPAs aim to promote legal trade in timber and timber products by bringing FLEGT-licensed products to the EU market. ထို့အပြင် VPAs များသည် EU မဟုတ်သော နိုင်ငံများ၏ကုန်သွယ်ရေးကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်နေသည်။ ယနေ့အထိ VPAs များ အားလုံးသည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ၏ EU သို့တင်ပို့ကုန်များသာမက တင်ပို့ကုန်အားလုံးအကျုံးဝင်သည်။ VPAs အများစုတွင်လည်း ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း သစ်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ VPA တစ်ခုစီက ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှထုတ်ပေးထားသော FLEGT လိုင်စင်အရေအတွက်နှင့် EU မှ လက်ခံရရှိသော လိုင်စင် အရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် EU မှ လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်လေ့လာစောင့်ကြည့်သူကို ခန့်အပ်ပြီး VPAs နှင့် FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း၏ သစ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက် နေမှုများကို ပိုင်းခြားလေ့လာစေပါသည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ FLEGT လိုင်စင်ရ ထုတ်ကုန်များအား ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက် သည့် ကဏ္ဍ တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
VPAs သည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ သစ်တောကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဥပဒေများ မည်မျှရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနားလည်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုသောအချက်အပေါ်မူတည်သည်။ VPAs သည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ သစ်တောကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဥပဒေများ မည်မျှရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနားလည်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုသောအချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ပြဿနာများတွင် တရားဝင်ခြင်း အဓိပ္ပယ် သတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲစေသည့် သစ်တော ကဏ္ဍ နှင့်ဆက်စပ်နေသော ဥပဒေများတွင် တစ်သမတ်တည်း မရှိမှုများ သို့မဟုတ် လစ်ဟာနေမှုများ ပါဝင်နေသည်။ ဥပဒေများသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း အားရလောက်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်အခါတွင် အခြားပြဿနာများဖြစ်ပေါ် လာသည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ဥပဒေများအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းက ဆင်းရဲသူများကို မလျော်မကန်ဒုက္ခပေးသောကြောင့် အချို့ဥပဒေများသည် တရားမျှတမှုမရှိဟု စဉ်းစားနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များ သည် ဥပဒေပြုရေးနှင့်၊သို့မဟုတ် မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးအတိုင်းအတာသည် ကြီးမားစွာကွဲပြား ခြားနားသည်။ အချို့နိုင်ငံများက လက်ရှိ ဥပဒေများသည် ကျေနပ်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟုအခိုင်အမာပြောကြသည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖော်ပြပါဖြစ်ရပ် များသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ မူဝါဒ အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်း
FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းအတွက် ဥပဒေပြုနိုင်ခြင်း
အားနည်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ရန် ကျယ်ပြန့်သော ဥပဒေရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ VPA မှ ဥပဒေပြုရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်နိုင်သနည်း နှင့် ပတ်သက်သည့်ကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ဌာနများနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များမှတစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို VPA လုပ်ငန်းစဉ်မှ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်များမှာ။ ။
လိုက်နာမှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာစေခြင်း
ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာခြင်း
လွတ်လပ်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
သာဓကအားဖြင့် - VPA လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း နိုင်ငံတကာငွေကြေး သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းအစီအစဉ် များသည် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအတွင်းနားလည်ရန်နှင့် ပါဝင်နိုင်ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကိုခိုင်မာစေသည့် သင်တန်းများကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ VPAs အများစုသည် နောက်ထပ် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကို တွဲဖက်ပါဝင်ရေး ဆောင်ရွက်မှု အစီအမံ များ နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲများတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
VPA မှ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်းနှင့် VPA အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် အပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံအများအပြားတွင် ပြည်တွင်းသစ်ဈေးကွက်များသည် တရားမဝင်သလို ထိန်းချုပ်မှု လည်း မရှိပါ။ ၎င်းဈေးကွက်များသည် လူပေါင်းများစွာ၏နေထိုင်စားသောက်ရေးကို ထောက်ပံ့ပေး နေသော်လည်း ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ တရားမဝင်မှုက ထူးခြားသော လက္ခဏာသွင်ပြင်ကိုဖော်ပြနေပါ သည်။ ဤတရားမဝင်မှုသည် ညံ့ဖျင်းသောဥပဒေ၊ ညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်မှု၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေသော စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် တမင်ရည်ရွယ်သည့် ဒုစရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင် သည်။ ပြည်တွင်း သစ်ဈေးကွက်သည် နိုင်ငံအတွက် ဝင်ငွေရရှိမှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင်ကြီးထွား လာသော တရားမဝင်ပြည်တွင်းဈေးကွက်များသည် သစ်လုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ရေးဇောင်းပေး သည့် သစ်ဈေးကွက်များထက်ကြီးမားသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် VPA ကို ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသော တရားမဝင် ပြည်တွင်း သစ်နှင့်သစ်ထွက်ပစ္စည်းများ ဈေးကွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရန် လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကိစ္စများတွင် VPAs မှ မူဝါဒများ သို့မဟုတ် ဥပဒေများပြောင်းလဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းဈေးကွက်များ၏ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံနှင့်အဖွဲ့ အစည်းပြောင်းလဲခြင်း ဆီသို့ဦးတည်သွားတတ်သည်။ သို့ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများသည် လူစုကွဲနေခြင်း၊ စုစည်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အထူး သဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် တရားမဝင်ဖြစ်နေလျှင်၊ တရားမဝင်ဈေးကွက်များကိုင်တွင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်း လွယ်ကူခြင်းမရှိပေ။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ VPAs တွင် ပြည်တွင်း စျေးကွက်ဆောင်ရွက်မှု အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းသည် နိုင်ငံသားများမှ သစ်တောသယံဇာတများကို စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးချ ခြင်းတွင် အစိုးရများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ခံမှုကို ထိန်းထားရန် အထောက်အကူ ပြုသည်။ သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများတွင် ငှားရမ်းခနှင့်အခွန်ရငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြင်း၊ တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ရေတိုအကျိုးလုပ်ရပ်များနှင့် သစ်တောများ အပေါ်မှီခိုနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အပေါ်ကျရောက်နေသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အကျိုးသက်ရောက် မှုများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် VPA တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးပမ်းမည့်အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသည်။
လွတ်လပ်သော သစ်တော လေ့လာစောင့်ကြည့်ရန် ဖန်တီးပေးခြင်း
VPA ၏ အဓိကစာသား သို့မဟုတ် အများပြည်သူသတင်းအချက်အလက်၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ဖော်တင်ပြရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ
အကျဉ်းချုပ်များ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် အများပြည်သူအစည်းအဝေးစသည့် VPA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ဖော်တင်ပြရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ
ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများကို အများသိနိုင်ရန် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း
VPA ဆွေးနွေးစဉ်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အားကောင်းစေရန် အစောပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား ဆွေးနွေးမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခဲ့ပြီး အကောင် အထည် ဖော်သည့် အဆင့်တွင် တိုးတက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်အခြေအနေပေးခဲ့ပါသည်။ VPA ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေရာတွင် VPA ၏အန္တိမအောင်မြင်မှုသည် ၎င်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှု အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှအစိုးရ၏ အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကတိကဝတ်အပြင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆက်သွယ်ရေးသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေပါသည်။ အချို့သော VPA များတွင် VPA၊ ၎င်း၏ရလဒ်များနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပြည်သူလူထုသို့ ထောက်ပံ့ ရန် ဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ အတွက် စီမံချက်များပါဝင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးတွင် သစ်တောများ အပေါ် မှီခိုနေရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်ကုန်သွယ်မှုတွင်ပါဝင်နေသည့် အမျိုးသားအဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဥရောပမှ သစ်ဝယ်ယူသူများ အထိထိတွေ့သည့်အစီအစဉ်များလည်းပါဝင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးတွင် သစ်တောများ အပေါ် မှီခိုနေရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်ကုန်သွယ်မှုတွင်ပါဝင်နေသည့် အမျိုးသားအဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဥရောပမှ သစ်ဝယ်ယူသူများ အထိထိတွေ့သည့်အစီအစဉ်များလည်းပါဝင်သည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏VPA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကဏ္ဍ တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီက အဖွဲ့ဝင်များမှ VPA ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို သေချာစေပါသည်။ ကော်မတီသည် VPA ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုများ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် မကျေနပ်မှုတစ်ခုခု သို့မဟုတ် VPA လေးစားလိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း ရှိလာပါက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကော်မတီသည် တရားဝင် သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်နှင့် အကယ်၍ လွတ်လပ်သော လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူရှိပါက ၎င်းတို့ထံမှ အစီရင်ခံစာကို ရယူပြီးစစ်ဆေး အတည်ပြုပေးရသည်။ ထို့အပြင် EU သည် FLEGT လိုင်စင်သစ်များကုန်သွယ်ခြင်းကြောင့် သစ်ဈေးကွက် အပေါ်သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်ရန် လွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူကို ခန့်အပ်ပါသည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ VPA စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကဏ္ဍတွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါ။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် သက်ရောက်မှုများ
VPA သည် စာသားနှင့်နောက်ဆက်တွဲများတွင် ဘောင်ခတ်ထားသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပြင် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို သက်ရောက်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်နိုင် သည်။ ဥပမာ၊ VPA သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်မှုလျှော့ချရေး သို့မဟုတ် မြေယာပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး နှင့် အခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့ဦးတည်ပေး ကောင်းဦး တည်နိုင်ပါသည်။ VPAs များသည် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့် အတန်းအစားကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန် ထုတ်လွင့်မှုလျော့ချခြင်း (REDD+) နှင့် သစ်တောကဏ္ဍတွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အခြားကနဦးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် သတ္တုတူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးကဲ့သို့သောကဏ္ဍများတွင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လှုံ့ဆော်နိုင်ပါသည်။
VPA မှ ပါဝင်ခြင်းကိုမည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
FLEGT လိုင်စင်ရ ထုတ်ကုန်များကိုကုန်သွယ်ခြင်း
VPAs များတွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ဆောင်ရွက်မှုအစီအမံများ
Liberia-EU 2012။ Progress Report: Moving Towards VPA Implementation. Preparation for the Implementation of the FLEGT Voluntary Partnership Agreement. 2011-2012. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Ghana-EU. 2012။ Annual Report 2012 - Implementing the Ghana-EU Voluntary Partnership Agreement [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]